စိန်ခေါ်မှုများကို စတင်ရင်ဆိုင်ခြင်း | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»စိန်ခေါ်မှုများကို စတင်ရင်ဆိုင်ခြင်း	Leaveacomment
စိန်ခေါ်မှုများကို စတင်ရင်ဆိုင်ခြင်း	Posted by danyawadi on March 23, 2016 in သတင်းများ	Byမင်းတင် Tuesday, March 22, 2016
သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင် မြှောက် ခံထားရသူ ဦးထင်ကျော်က ၀န်ကြီးဌာန ၂၁ ခု၊ ၀န်ကြီး ၁၈ ဦးဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည့်အကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံကို နားထောင်ကြည့်ရှုနေရင်း ဆက်စပ်တွေး စရာ၊ မျှော်ကြည့် ယူစရာ၊ အပြုသဘောသုံးသပ်စရာ၊ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာ…. တွေ တသီကြီးတန်းစီ စဉ်းစားနေဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ တလက် လက်တောက် ပနေသော မျှော်လင့်မှုတွေအတွက် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်စိန်ခေါ်မှုအများအပြားကိုလည်း ယှဉ်လျက်၊ ကပ်လျက်ပုံရိပ်ထင်ထင် မြင်နေရ သည်။ လူတွေ၊ ပြည်သူလူထု နိုင်ငံသားအများစုကြီးအတွက်က တော့ ကိုယ်တိုင်ယုံကြည် စိတ်ချ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ထား ခဲ့ သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီချုပ်အစိုးရသစ်အပေါ် ခပ်အေး အေးလူလူ သက်သောင့်သက်သာ ပဲရှိနေကြကြောင်း လူမှုကွန်ရက် ပေါ်မှာ အထင်းသားပေါ်နေ၏။
ပြုပြင်တည်ဆောက်ပုံဖော် မည့် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိက အခြေခံကျသည့် အချက်အချို့ကိုပဲ ရှင်းလင်းတင်ပြသွားသေးတာဖြစ်၍ အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လျှင်တော့ ၀န်ကြီးဌာန ၂၁ ခု၏ ရှေ့ဆက်သွားမည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ မဟာဗျူဟာကို တွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။ ကျစ်လျစ်ခိုင်မာ ထိရောက် အားကောင်းသောအစိုးရ တစ်ရပ်ပုံစံဖြင့်သွားမည်…ဟူသော အချက်နှင့်ယှဉ်တွဲလျက် ဦးတည်တိမ်းညွတ် မှုတွေ၊ အာမခံမှုတစ်ချက်၊ အလေးထားဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းရှင်းလင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ ယခုလို ခပ်ရှင်းရှင်းမြင်ရ၏။
(၁) တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနသစ်သည် ပြည် ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်း သာယာဝပြောရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် ရေရှည်ခိုင်မာ တည် ငြိမ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ဖြစ် သည်။ ဘာကို ရည်ရွယ်သည်လဲ ဆိုသည်က ဝေါဟာရထဲမှာပင် ပါ ၀င်နေ၏။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အရေး ဖြစ်သည်။ တန်းတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဖြစ်သည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန် ကြီးဌာနတွေ လျှော့ချ၊ ပေါင်းစပ် လိုက်သော်လည်း ‘‘ဥပဒေ၊ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းတို့နှင့်ညီညွတ်ပါ က’’ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်း(ပြည်သူ့ဝန် ထမ်း၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန် ထမ်း) အားလုံး အလုပ်လက်မဲ့ မ ဖြစ်စေရဟူသော အာမခံချက်ပါ ၀င်သည်။ လုပ်ငန်း သဘောတူ ၀န်ကြီးဌာနတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာတွေ ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်၍ ဤ ကိစ္စအပေါ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ် အာမခံချက် ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ ငယ်သော်လှ၏။ (Small is Beauty) နှင့် ကျစ်လျစ်ခိုင်မာ မြင့်မားမှု (Compact) တို့ ပေါင်း စည်းလိုက်သော အစိုးရပုံစံသစ် တစ်ရပ်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ အရေအတွက်ထက် အရည်အ သွေးကို ပိုဦးစားပေးခြင်းဖြစ်၍ အ ရည်အသွေးမြှင့်တင် ဖို့နှင့် ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာ၊ စီမံခန့်ခွဲဆောင် ရွက်မှု၊ လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေ ရင်းသင်ယူမြှင့်တင်… ဆိုတာတွေ ကတော့ ဆက်တိုက် အားဖြည့် လုပ်သွားကြရဖို့ရှိပါမည်။
(၃) ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီးဌာနများ လျှော့ချ၊ ပေါင်း စပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် လာမည့် အစိုးရသစ်သက်တမ်း တစ်ကြိမ် ကာလငါးနှစ် အတွက် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ ကျပ်သန်းပေါင်း ငါး ထောင် (အနီးစပ်ဆုံး) ခြိုးခြံချွေ တာလိုက်ပြီးဖြစ်သွားသည်။ ထို ငွေပမာဏကို ပညာရေး၊ ကျန်း မာရေး၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ အတွက် အဓိကထား ဦးစားပေး ပိုမိုသုံးစွဲသွားမည်။
နိုင်ငံတော်က ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းပါးဆုံး (LDC-Least Development Countries) စာ ရင်းထဲ ၀င်နေခဲ့တာ ၁၉၈၇ က တည်းကဖြစ်၏။ ၀န်ကြီးဌာနလျှော့ချရုံနှင့်လည်း အားလုံးတော့ မပြီးသွားနိုင်သေးပါ။ ခြိုးခြံချွေတာရေးမူဝါဒတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လာဖို့ မြင်ရပါသည်။ ဦးထင်ကျော် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်ထဲက ‘‘အဂတိကင်းစင်သော လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ဖော်ဆောင်ရေး’’မူဝါဒသည် ယခု ‘‘ခေါင်ကစ အမိုးလုံအောင် စပြုပြင်လိုက်ခြင်း’’ ပဲဖြစ်သည်။ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အာဏာနှင့် ကျင့်ဝတ်…. အလွဲသုံးခံကြရ၍ ပုံပျက်ပန်းပျက် ဖြစ်နေခဲ့တာ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက် ကြာခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်ကို နေ့ချင်း၊ ညချင်း ဥုံ ဖွလုပ်၍တော့မရပါ။ အင်မတန်အကဲဆတ်လှသော အတ္တအကျိုးစီးပွားတွေ စုံပြုံပြွတ်သိပ်နေသည့် အကြောင်းကိစ္စကြီးဖြစ်၍ အင်မတန်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ကိုင်တွယ်သွားရမည့်အရေးကြီးလှသော မူဝါဒ…။
ထင်ရှားမြင်သာသည်က တော့ မနေ့၊ တစ်နေ့ကပဲ ဒီချုပ် CEC ၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက် တာဇော်မြင့်မောင်ထုတ်ပြောခဲ့ သည့် မြစ်ဆုံဆည် ကိစ္စ၊ လက်ပံ တောင်းကိစ္စတို့လို ကိစ္စကြီးတွေ မျိုးဖြစ်သည်။ ဦးပိုင်၊ခရိုနီ၊တရုတ် တို့နှင့် အများဆုံးဆက်စပ်နေမည့် ကိစ္စကြီးတွေ အတော်များများ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြရမည် ဖြစ် သည်။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် စကားကိုပဲ ယူပါမည်။ အစိုးရသစ်က ‘‘ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုမည်မဟုတ်’’ အတော်‘တာ’သွား၏။
ရိုးရိုးပဲ ကြည့်လိုက်လျှင် ပြည်သူလူထုအနေဖြင် အခွန်အ ကောက်သာပေးနေခဲ့ကြရပြီးဘာ မျှလောက်လောက်လားလား ပြန် ခံစား ပိုင်ခွင့် ရှိခဲ့ တာမဟုတ်။ဆယ် စုနှစ်များတွေမှာ အကြောက်တ ရားကြောင့်သာပေးခဲ့ရပြီး မထိုက် မတန်
← ရိုဟင်ဂျာ နှိပ်ကွပ် ခံရမှု လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု မမြောက်ကြောင်း ကန် ဆုံးဖြတ်	အ​မေရိကန်​ အကျဉ်း​ထောင် ​တွင်​ ရဲ​မေ ၂ ​ယောက်​ က အကျဉ်းသား တစ်​​ယောက် ကို​ မုဒိန်းကျင့်​ မှုဖြင့်​ ရဲ​မေ ကို တရားစွဲ →